Heshiis La Filaayo In Ay Kala Saxeexdaan Labada Xisbi Mucaarid ee WADDANI Iyo UCID | Salaan Media
Home Wararka Heshiis La Filaayo In Ay Kala Saxeexdaan Labada Xisbi Mucaarid ee WADDANI...
Heshiis La Filaayo In Ay Kala Saxeexdaan Labada Xisbi Mucaarid ee WADDANI Iyo UCID
July 23, 2013 Hargeysa(SM) – Labada xisbiyada mucaaridka ah ee WADDANI iyo UCID, ayaa la filayaa inay 48 saac gudahood ku kala saxeexdaan heshiis ku salaysan iskaashi mucaaridnimo iyo meel looga soo wada jeedsado danta iyo maslaxada guud ee Qaranka Jamhuuriyada Somaliland.
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ay xaqiijinaaya in labada guddoomiye ee xisbiyada UCID Eng. Faysal Cali-waraabe iyo WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ay si rasmi ah u kala saxeexan doonaan heshiis mucaaridnimo ku salaysan oo la filayo inuu si xooggan uga nixiyo xukuumada iyo xisbigeeda tallada haya ee KULMIYE.
Labada xisbi waxay wadahadalka iyo diyaarinta heshiishka u saareen guddi farsamo oo ka kooban lix xubnood oo saddexba xisbi ka socoto, kuwaas oo la sheegay inay hadda dhamaystireen heshiiska rasmiga ah ee labada xisbi ee UCID iyo WADDANI Kala saxeexan doonaan muddo 48 saac gudahood ah (Salaasada maanta ama Arbacada berri), kadib markii wadahadalo si hoose u socday lagu heshiisiiyey labada Guddoomiye ee WADDANI iyo UCID- Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) iyo Eng. Faysal Cali-waraabe, kuwaasoo la caddeeyey inay ka heshiiyeen khilaafkii dhexyaalay, isla markaana iska cafiyeen gefafkii siyaasadeed ee midka ka kale ka tirsanayey.
Xubin ka tirsan guddida lixda ah ee labada xisbi u saaray dhamaysirka heshiiskooda, ayaa warbaahnta u sheegay xalay in heshiisku dhici doono Salaasada maanta ama Arbacada berri, iyadoo labada dhinac ku heshiiyey sidii ay isku kaashan lahaayeen, iyadoo lagu shaqaynayo doorkii mucaaridnimo, isla markaana danta qaranka meel looga soo wada jeedsan lahaa, labada xisbi ee WADDANI iyo UCID-na qayb uga qaadan lahaayeen dhismaha iyo horumarinta Somaliland.